Lalana Antsirabe – Betafo (RN 34) : Tazanim-potsiny ny fahasimbany
dimanche, 24 octobre 2021 17:56
Potika tena efa hatry ny ela ny lalam-pirenena faha 34 anelanelan’Antsirabe sy Betafo amin’izao fotoana, ary raha sanatria ho tratry ny orana eo, dia izay no vita, hoy ny vahoaka.
Raha tena laharam-pahamehana ho an’ny fitondrana amin’izao ny lalana, tsy tazanim-potsiny toy izao ny fahasimbany, ny volan’ireo mpikojakoja lalana rahateo aza moa tsy mbola voavaha hatreto hoy ireo mpampiasa iny lalana iny.
Nahita maso ny fahasimbana ny minisitry ny asa Vaventy tamin’ny volana Jona 2021 raha nizara “titre” faobe tany Betafo. Vao haingana no nandalo teo ny filohan’ny Antenimierandoholona nanao fitsidiham-paritra, nefa dia mandalo fotsiny ity lalana ity.
Nanakiana mafy ny minisitry ny Asa vaventy ny depiote voafidy tao Betafo tamin’ny IRD, ary nilaza fa efa ny lalana indray no ambany noho ny tanimbary, ary nanao antso avo ny mba hijerena azy ity.